Coolpad M3: Tilmaamaha, Qeexitaanka iyo Qiimaha | Androidsis
Haaruun Rivas | | Shiinaha Shiinaha, Mobiles
El Coolpad M3 Waa taleefankii ugu dambeeyay ee soo gala Coolpad ee si rasmi ah looga sameeyo Shiinaha. Mobiladani waxay timid iyadoo ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu raqiisan shaashadda la soo sheegay. Waxaa intaa sii dheer, waxaa kuxiran waxyaabo khafiif ah oo dhexdhexaad ah waxayna la socotaa qiimo jaban oo la hubo oo la hubo inay ku habboon tahay macaamiil kasta
Soo saarahaani wuxuu badanaa diiradda saaraa suuqa Hindiya, laakiin markan, ayaa qalabkan cusub ku soo saaray gobolkan. Marka xigta, waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta terminalkan dhaqaale badan.
1 Coolpad M3 Tilmaamaha iyo Sooc
2 Coolpad M3 qiimaha iyo taariikhda la siidaayo
Coolpad M3 Tilmaamaha iyo Sooc
Taleefanka cusub ee sumadda ayaa cabiraya 149.3 x 72.3 x 8.95mm miisaankiisuna waa 171 garaam. Qaybta dambe ee dambe waxay u muuqataa inay ka samaysan tahay muraayad, taas oo u muuqata inay ka tarjumayso hooska kala duwan marka laga eego dhinacyo kala duwan. Maxaa intaa ka badan, Waxaa ku qalabeysan shaashad LCD oo dhererkeedu yahay 5,85-inch Waxay bixisaa HD + xallinta 1512 x 720 pixels iyo saamiga 19: 9.
Gudaha, waxaa ka mid ah octa-core MediaTek MT6750 chipset, kaas oo ku shaqeeya max. 1,8 GHz, oo ay weheliso 4 GB oo RAM ah. Tan waxaa u dheer, waxay leedahay keyd waddan ah oo 32 GB ah iyo booska kaarka microSD ee keydinta dheeriga ah. Isla mar ahaantaana, taleefanka casriga ah waxaa taageera batari awood leh oo ah 2,800 mAh oo taageera 5 V / 2 A lacag.
Kaamirada hore ee 5 megapixel waxaa lagu qalabeeyaa dhinaca hore in la soo qaado sawirada la isku qurxiyo iyadoo la kala saarayo muuqaalka wajiga ragga iyo dumarka iyo midabka maqaarka. Qalabaynta laba kamaradood oo taagan oo leh iftiin LED ah ayaa la dhigayaa dhinaca dambe ee taleefanka. Si faahfaahsan, qaybtan ugu dambeysa waxaa ku jira 13 megapixel sensor weyn iyo, laga yaabee, mid kale oo ah 5 MP (xallintiisa lama shaacin).
Amniga, telefoonka waxaa lagu qalabeeyaa aqoonsiga wajiga AI iyo akhristaha sawirka gadaal-dhajinta ah. Dareeraha faraha ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu soo bandhigo barnaamijyo kala duwan. Dhinaca kale, Coolpad M3 waxaa lagu soo shubay Android 8.1 Oreo. Astaamaha kale ee taleefanka waxaa ka mid ah labada taageero ee SIM, 4G LTE, Wi-Fi Bluetooth, GPS, microUSB 2.0, iyo aaladda codka ee 3.5mm.
Coolpad M3 qiimaha iyo taariikhda la siidaayo
Coolpad M3 ayaa hadda loo heli karaa horay loogu sii dalbado goobta tafaariiqleyda, Jingdong, ee Shiinaha. Iibinta rasmiga ah ee taleefanku waxay bilaabmi doontaa 10 subaxnimo (waqtiga maxalliga ah ee Shiinaha) bisha Noofambar 28 iyo Qiimuhu wuxuu noqon doonaa 799 yuan (100 euro qiyaastii.). Labada nooc ee kala duwan ee Coolpad M3 waa 'Gentleman's Enamel' (madow) iyo Blue Sea (buluug).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » Coolpad M3 waa rasmi: taleefan soo gal oo leh HD + panel (19: 9) iyo in ka badan oo qiimo aad u jaban ah